बोधिसत्वको मणि दानस्थल मणिचुड दह – नेवाः टाइम्स
प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल मणिचुड दहसम्मको यो यात्रा मेरो दोस्रो हो । त्यहाँसम्म पुग्ने मोटर बाटो पहिला त थिएन, अब बन्यो कि ? आजभोलि हिड्ने बाटो मास्ने र मोटर बाटो बनाउने एक खालको लहर देसैभरि चलेको छ, कुनै विचार धारा वा फेसन जस्तै । यहाँ पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । पहाडमा घुुमाउरो बाटो, पटक पटक आइराख्ने मोडहरु र अप्ठ्यारो ड्राइभिङ, साधारण कुरा हुन्छ । यहाँ पनि यही साधारण कुरा देख्न पाइन्छ । तर एक ठाउँमा पुुगेर गाडी घ्याच्च रोकिन्छ र भन्छन्, ‘‘माथिसम्म लान अलि नमिल्ला जस्तो लाग्यो । तपाईहरु गएर आउनुस्, त्यस्तै दश पन्द्रह मिनेटमा पुगिन्छ ।’’
‘नहिडेको बाटो हो र ? अनि, खुब पुगिन्छ दश पन्द्रह मिनेटमा’ भन्न मन लागेको त हो । भनिनँ । मनमनै फिस्स हाँसे मात्र । मोटर गुड्न मिल्ने गरी फराकिलो पारिएको बाटो अगाडि अझै बाँकी छ । घन्टाभन्दा बढी हिड्नु पर्दछ । नमिल्ला जस्तो छ भनिसकेको ड्राइभरलाई कर गरेर लैजाउ भन्न पनि मिल्दैन । यति हिड्नुुपर्छ उति हिड्नुपर्छ भनेर पहिलो पल्ट आएकालाई अनि अत्याएर तर्साउनु पनि उचित थिएन । यही भएर हिड्दै जाउँ, पुगिन्छ भनी दिएँ ।
डाँडाको टुप्पो र जंगलको बीचमा रमाइलो वातावरण थियो । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको ठाउँ त हो नै, साथसाथै जैविक विविधता र जीवजन्तुुहरुका लागि पनि महत्वपूूर्ण ठाउँ हो । भनिन्छ, नेपालमा मात्रै पाइने काँडेभ्याकुर पनि भनिने इन्मेमिक पक्षी ‘स्पाइनी व्याब्लर’ यहाँ पाइन्छ । पर्खन पाएको भए काँडेभ्याकुर पनि देख्थ्यौं तर समयले साथ दिएन । भ्याए मणिगुफामा पनि पुुग्ने योजनालाई स्थगन गरी गएकै बाटो फक्र्यौं ।